Basket: zvinopfuura notepad, murongi weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kune akawanda mameseji edhita kana notepads yeLinux, mamwe echinyakare kubva kuUnix nyika, vamwe vanoedza kugadzira nekupa mabasa matsva, pamwe nemamwe mapurojekiti kuyedza kuteedzera kune mamwe mabhureki akadai seWindows. Asi pamwe iwe hauna kuziva nezve chinonakidza chirongwa chinowanikwa kune yako distro inonzi Basket uye iri chikamu chevapfumi KDE ecosystem (inogona kuiswa mune dzimwe nharaunda pasina dambudziko, sezvaunofanira kuziva).
Iyi notepad inogona kukubatsira iwe zuva nezuva-zuva kuitira kuti iwe usakanganwa chero chinhu uye kuronga hupenyu hwako. Asi haisi padhi yakapusa senge chero imwe, asi inopa izvo zvinozivikanwa semabhasiketi kana madhirowa aunogona kuwedzera nekugadzirisa pamadiro. Mukati mega roga remabhasikiti aya unogona kudhonza nekudonhedza mhando dzese dzezvinhu (zvinyorwa, zvinongedzo, mifananidzo, nezvimwewo).
Izvo zvinhu zvinowedzerwa kune iyo dhirowa nemapoka, inogona kugadziriswa, kuteedzerwa, nezvimwe, kuitira nyore kwazvo manejimendi nemushandisi. Nenzira iyo, iwe unogona kuchengeta zvese zvaunoda padyo padyo, kwaunoda iwe, uye nemanotsi akawedzerwa.
Ehezve, iko kushanda kwe yemahara, yakavhurwa sosi, yemahara, uye ine rezinesi pasi peGNU GPL v2. Uye, kupedzisa ruzivo urwu, heano mamwe mashoko eBasket angakufarire:
Nyora manotsi nemakotesheni ako, mazano, nezvimwe.
Unganidza chero mhando re data, kubva kumifananidzo, zvinongedzo, email kero, mafaera, mavara, zvinyorwa, nezvimwe.
Rakareruka kurongeka munzvimbo yepamusoro nekuda kwemabhokisi kana madhirowa kwaunogona kuwedzera iyo data.
Manotsi anogona kumakwa kune rumwe ruzivo, semuenzaniso, nezvakakosha (zvakakosha, pekutanga, ...), kana nechero mhando yechinyorwa (zano, basa, wega, ...).
Zvese zviripo uye nekukurumidza kuwana, kudzora kutambisa nguva uye kugadzirisa kugadzirwa. Uye zvakare, inotsigira kuwanda kwekhibhodi mapfupi ekuwana kwakananga.
Yako data ichave yakachengeteka, nekuti ine otomatiki yekuchengetedza kana chimwe chinhu chashandurwa, kuti pasave nechinorasika kana iwe ukakanganwa kusevha nemawoko.
Kudzivirirwa kwemashoko ne password, kuitira kuti iwe chete iwe ugone kuwana zvinyorwa zvako uye data. Iyo zvakare inobvumira dhata kunyorera uchishandisa yeruzhinji uye yakavanzika kiyi vaviri.
Inogona kuiswa mune yako Kontact.
Iyo inokutendera iwe kugovana yako data nekukurumidza nevako vaunoshanda navo kana boka. Iwe unogona kunyange kutumira mabhasikiti ako kana mabhokisi kuHTML.
Inotsigira kupinza kubva kune mamwe maapplication, akadai seTuxCards, KNotes, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Basket: zvinopfuura notepad, murongi weLinux
Tswanda zvakare inokutendera iwe kuvhura zvinyorwa ne Mahara Hofisi
Asi kana chirongwa ichi chakasiiwa kwemakumi emakore, kwete? Ini handifunge kuti kuchenjera kukurudzira chirongwa chechinyakare.